सोसल मिडियामा किन यी व्यक्तिलाई भनिँदै छ, ‘रानू मण्डलका छोरा त होइनन् ?’ | Ratopati
वास्तवमा हालै एक फेसबुक पेजले एक निकै साधारण देखिने व्यक्तिको भिडियो सेयर गरेको छ । यी व्यक्ति भित्तामा अडेस लागेर उभिएका छन् र गीत गाइरहेका छन् । उनले भिडियोमा दुईवटा गीत र्गा । पहिलो गित ‘तेरी उम्मीद तेरा इन्तजार करते हे’ र दोस्रो गीत ‘सोचेंगे तुम्हे प्यार’ । यो भिडियोको क्याप्सनमा सोधिएको छ, ‘कतै यी रानू मण्डलका छोरा त होइनन् ? के यी हिरालाई पनि चम्काउन कोही तयार हुनेछन् ? एकपटक पक्कै सुन्नुहोस् ।’